Maxaan u jecel nahay bisadaha | Bisadaha Noti
Taasi waa su’aal bini aadamku mar qudha isweydiiyey ... oo ilaa maantana uu wali isweydiiyo, mararka qaar. Si kastaba ha noqotee, waa xayawaan madaxbannaan, cidlo ah oo aan rabin inuu dadka la joogo. Tani waa waxa had iyo jeer la dhaho, sax? Laakiin, kuweena fursad u helay inay ka mid noqdaan qoysaskooda, iyo kuweenna Waan ognahay inaysan taasi ahayn. Maya.
Haddii aadan weli haysan doofaar yar, halkan ayaad ku ogaan doontaa maxaan bisadaha u jecel nahay.
1 Maxaan ugu jecel nahay iyaga?
1.1 Waxay leeyihiin dabeecad la mid ah kuweenna
1.2 Iyagu waa saaxiibkeenna dhogorta wanaagsan leh
2 Muxuu saynisku sheegayaa?
2.1 Bisadaha jecel waxay u muuqdaan kuwo isdhaafsi badan
2.2 Kalluumeysatadu waxay jeclaan karaan dhaqanka inbadan
3 Ma jecli bisadaha, waayo?
Maxaan ugu jecel nahay iyaga?
Bisadaha iyo dadku way kala duwanaan kari waayeen: qaar, inta badan lama filaan ah, kelinimo ah, oo jecel inay maqnaadaan oo noloshooda qayb fiican ku qaataan hurdada; kuwa kale dhinaca kale, waxaan nahay bulsho, waxaan jecel nahay kalinimada laakiin qadar yar (guud ahaan), badanaana waxaan ku raaxeysanaa banaanka wax badan.
Si kastaba ha noqotee, inbadan oo naga mid ah waxay ku dhacaan jacaylka aragtidiisa macaan, dhaqdhaqaaqyadiisa dhaqaaqa, taas oo ah in, in kasta oo ay u muuqan karto wax ka duwan, waxay wadaagaan hidde ahaan inta badan xayawaanada sida shabeelka, libaaxyada ama cougars.
Ma saxbaa in, ugu dambayntii, waxa naga yaabiya bisadaha? Hagaag, iyagu ma aha kuwa guryaha lagu dhaqo, ama haba yaraatee. Iyagu maahan sida eeyaha, kuwa dhogorta leh oo la yaab leh laakiin ka duwan bisadaha, waxay had iyo jeer diyaar u yihiin inay ka farxiyaan aadanaha. Bisaduhu waxay maraan wadadooda.
Waad bari kartaa tabaha, laakiin waxay baran doonaan oo keliya hadday doonaan; hadday wax ku helaan (daaweyn, kalgacal kicin iyo / ama kulan ciyaar).
Fikradayda, waxaan jecel nahay xayawaanka dhogorta badan maxaa yeelay:
Waxay leeyihiin dabeecad la mid ah kuweenna
Waa run. Waxaa la ogyahay in xayawaanka, sidoo kale dadka, waxaan si wanaagsan ula falgalnaa noolaha kale ee leh dabeecad la mid ah kuweenna. In kasta oo bisaduhu ay weli yihiin xayawaan ugaarsade ah, oo dhalashadooda ilaa dhammaadkooda maalmahooda ku dhammaystira farsamooyinkooda ugaarsiga iyadoo la adeegsanayo ciyaar, haddana aad bay noogula mid yihiin waxyaabaha qaarkood. Laga yaabee, tan ugu muhiimsan in la wada noolaado wanaagsan. Tusaale ahaan:
Hadaad jacayl siiso isagaa ku siinaya. Hadaadse iska indhatirto, samayn doonaa wax kasta oo suurtagal ah si aad u hesho dareenkaaga.
Wuu ku salaamayaa markuu ku arko inaad timaadid, mararka qaarna xitaa wuxuu ku dhahaa "nabad gelyo" - meowing - markaad baxdo.
Aad buu u farxaa marka aad siinayso daaweyn-bisadaha-, iyo wax badan oo dheeraad ah markaad siiso xoogaa xabbad salmon ah, ama ham.
Markaad ula dhaqanto si xun hal mar, xiriirka wuu daciifayaa, iyo kalsoonidii ayaa luntay. Halkaas, waxay ku qaadan kartaa bilooyin bisadu inay markale wanaag kaa dareento.
Miyaad aqoonsan tahay qaar ka mid ah dabeecadahaan ku saabsan aadanaha?
Iyagu waa saaxiibkeenna dhogorta wanaagsan leh
Waxay yihiin madadaalo, bulsheed, kalgacal, way naga qosliyaan ... Dhamaanteed, kaliya inaan yeelano saqaf aan ka ilaalino cimilada xun, iyo quudiyayaal buuxa. Hagaag, iyo alaabada carruurtu ku ciyaarto, xagxagashada, baakadaha qashinka ... Laakiin waxaan u dooneynaa waxa ugu fiican iyaga, sidaa darteed kharashka maaliyadeed ee ku lug leh ... ma ahan wax welwel leh.
Sababtoo ah waa qeyb ka mid ah qoyskeena. 🙂
Muxuu saynisku sheegayaa?
Maqaalkani ma dhammaystirmi lahaa iyada oo aan la ogaan waxa saynisku ogaaday. Waa run oo markay sameeyaan daraasado ku saabsan habdhaqanka bisadda iyo / ama dadka iyaga jecel, waxaan aakhirka isweydiineynaa wax la mid ah: »oo hadda way garteen?». Waa sax.
Laakiin waa inaanan iloobin taas, maxaa yeelay waxaan nahay caqli saafi ah, dad badan waa wax cusub. Weli waxaa jira dad badan oo isweydiinaya bisaduhu inay dareen leeyihiin iyo in kale.
Annaga oo tan oo dhan xisaabta ku darsaneyna, bal aan hadda aragno saynisku wuxuu leeyahay.
Bisadaha jecel waxay u muuqdaan kuwo isdhaafsi badan
Sannadkii 2010, wadar ahaan 4500 qof ayaa buuxiyey foom ay soo diyaarisay Jaamacadda Texas. Bari waxbarashada Waxaa hogaaminayey cilmi nafsiga Sam Gosling, wuxuuna u kala qaybiyey jawaab bixiyaasha kuwa jecel eeyga, bisadaha jecel, xayawaanka iyo labadaba.
Su'aalaha waxaa loo sameeyay si loo ogaado waxa u janjeedha inay noqdaan dad bulsheed waxay ahaayeen, haddii ay maskax furan yihiin, haddii ay saaxiibtinimo leeyihiin, iyo / ama haddii ay walwalsan jireen, iyo kuwo kale. J) Haa, Tijaabinta Golding waxay ku qeexday kuwa bisadaha jecel inay yihiin dad aad u milicsan oo isbadal badan, shucuur ahaan aan xasilooneyn, laakiin leh mala-awaal iyo saadaal sare oo leh khibrado cusub.
Ku socota 'xayawaano'waxaa laga yaabaa inay dhaqanka aad u jecel yihiin
Afar sano kadib markii Gosling uu daraasaddiisa sameeyay, borofisar cilmu-nafsiga ka dhiga Jaamacadda Carroll ee Wisconsin oo magaceeda la yidhaa Denise Guastello ayaa iyadu wadatay hawlaheeda, iyada oo la tixgelinayo oo keliya shakhsiyadda xayawaanka jecel, laakiin sidoo kale deegaankooda.
Tusaale ahaan, qof aan u baahnayn inuu eeyga lugeeyo, wuxuu waqtigaas firaaqada ku qaadan karaa akhrinta buug, ama tusaale ahaan inuu booqdo matxafyada. In kasta oo, sida iska cad, taasi macnaheedu maaha in bisadaha jecel ay ka caqli badan yihiin kuwa eyga jecel, haba yaraatee; laakiin haa taasi mukulaalayaasha bisaduhu waxay u muuqdaan kuwo guryo badan leh oo soo dhex gala.
Waxaa laga yaabaa, oo kaliya laga yaabee, taasi waa sababta ay u jiraan fanaaniin badan iyo qoraayo, dhintay ama aan dhiman, oo ku noolaa ama la noolaa bisado, sida Jorge Luis Borges ama Ray Bradbury, iyo kuwo kale.
Hadaad rabto waad aqrin kartaa daraasada Halkan (Waxay ku qoran tahay Ingiriis).
Ma jecli bisadaha, waayo?
Waxaa jira dad aan jeclayn bisadaha, sidoo kale maxaa yeelay waxay ku soo saareen nooc cuqdad iyaga ah, ama shil ay galeen, ama sababtoo ah iyagu ma jecla iyaga maadaama midkeen naga mid ah uusan jeclaan karin hamsters tusaale ahaan.
Haddii ay tahay tan dambe, wax la qaban karaa ma jiraan. Laakiin haddii ay sabab u tahay cabsi-qabsi ama xaalad naxdin leh oo horay loo soo maray, markaa waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato xirfad-yaqaan, cilmi-nafsi yaqaan, gaar ahaan haddii aad la noolaan doonto qof jecel bisadaha. Tani waxay ka dhigi doontaa wada noolaanshaha shaki la’aan inuu aad uga wanaagsanaan doono.
Sidaas oo ay tahay, haku qasbin naftaada. Magac ahaan, Foobiyadu ma bogsanayso maalin ilaa maalinta xigta, mana salaaxayso bisad kuu soo dhowaata. Waa inaad si tartiib tartiib ah ugu socotaa, xawaarahaaga. Farxad iyaga fahmaan, tani waxay u badan tahay inay kaa fiicnaato.
Waxaan rajaynayaa inay kuu anfacday 🙂.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Maxaan u jecel nahay bisadaha
Waan jeclahay Iyagu waa noolaha cajiibka ah. Uunka Eebbe sida dhammaan noolaha ku nool koonkan
Jawaab ku sii Yajaira Lopez
Waxa la yidhi bisadda ilaah baa u abuuray, si uu u salaaxdo oo aanu cududdeena ugu qabsano, kumana samayn karno xayndaab sida, Shabeel, Libaax, Panther, shabeel, Haramcad, iwm. faallo sax ah?